यी हुन् २० देखि २५ लाख पारिश्रमिक लिने नेपाली सेलिब्रेटीहरु ! » Khulla Sanchar
यी हुन् २० देखि २५ लाख पारिश्रमिक लिने नेपाली सेलिब्रेटीहरु !
नेपाली सेलिब्रेटीहरुको पारिश्रमिक खासै सार्वजनिक हुने गरेको छैन । धेरैले एक फिल्मम काम गरेबात कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ भनेर गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै यति उति भन्ने नै हुँदैन भन्ने गर्छन् । उनीहरु कहिले काही मानिसहरु हरेर, कोसँग गर्न लागेको काम हो । ऊ सँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यो हेरेर पनि काम गर्नु पर्ने हुँदा पैसाको माग राख्न नसकीने कुरा पनि गर्छन् । तर पछिलो समयमा केहि सेलिब्रेटीहरुले आफूले तोकेको पारिश्रमिक पायो भने मात्रै काम गर्ने गरेको पाईएको छ । अभिनेता आर्यन सिग्देल , दया हाङ राई, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ , साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह लगायतका कलाकाहरुले आफ्नो पारिश्रमिक सार्वजनिक गरेका छन् ।
आर्यन एक फिल्ममा काम गरे बापत ७ देखि ८ लाखसम्म लिन्छन् । साम्राज्ञी दोस्रो फिल्म ए मेरो हजूर २ को लागि पाँच लाखमा अनुबन्धीत भएकी छिन् । त्यस्तै सृष्टि श्रेष्ठले गाजलूमा पाँच लाखमा काम गरेकी थिईन् । अभिनेता दया सौगातले एक फिल्ममा काम गरेबापत १० लाख लिने जानकारी पनि ईन्टरनेटमा फेला परेको छ ।
यो त सिनेमामा काम गर्ने अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुको सामान्य पारिश्रमिक भयो । तर यहाँ केहि निर्देशक अभिनेताको पारिश्रमिक २० लाख भन्दा धेरै छ । जुन सुन्दा हामी दङग पर्छौँ । आज हामी नेपाली सिनेमामा २० लाख भन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने चार जना सेलिब्रटीकोे बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
केहि नि अघि मात्रै निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले आफ्नो पािरश्रमिक बढाएर २० लाख पुर्याए । उनी अब फिल्म लभ लभ लभ निर्देशनको तयारीमा छन् । चपली हाईट, भिजिलान्ते, झोले, पशुपति प्रसाद लगायतका फिल्महरु निर्देशन गसिकेका उनी लगातार पाएको सफलता पनि आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर महंगो भएको अनुमान धेरैले लगाए । उनले भने आफूले पारिश्रमिक बढाउनुको कारण कामलाई दिनु पर्ने समय , गर्नुपर्ने मेहनत र महंगी भएको बताएका थिए ।
निर्देशक, अभिनेता तथा गायक निश्चल बस्नेतले काम गरेका प्राय सिनेमाहरु हिट छन् । लुट, कबड्डी , कबड्डी कबड्डी उनले निर्देशन गरेका सिनेमाहरु हुन् जसलाई दर्शकले खुबै रुचाए । अहिले उनी लुट २ को सुटिङमा ब्यस्त छन् । निश्चललाई धेरैले सफल र ट्यालेन्ट भएको निर्देशकका रुपमा चिन्छन् । उनी सफल मात्रै नभयर महंगा निर्देशक पनि हुन् ,यो कुरा भने धेरै कमलाई मात्रै थाहा होला । निश्चल एक फिल्म निर्देशन गरेबापत २५ लाख पारिश्रमिक लिने गर्छन् । निश्चलले लुट २ लाई आफै निर्माण र निर्देशन गर्न लागेका कारण कति पारिश्रमिक भन्ने खुलाएका छैनन् तर बाहिरी ब्यानरमा काम गर्नु परेमा २५ लाख लिने बताएका थिए । त्यस्तै उनी ८ देखि १० लाख आउने गरि कुनै देशको ओभरसिज राईट्स पनि लिन्छन् ।
पैसाका लागि भन्दा पनि राम्रो प्रोडक्टका लागि काम गर्ने सोच राख्ने रामबाबु गुरुङले कबड्डीको सिक्वेल निर्देशन गरेर चर्चा कमाए । उनको निर्देशनलाई पनि धेरैले रुचाए । प्राय आफ्नै ब्यानरका सिनेमामा काम गर्ने उनले पहिलो पटक ‘झोले २’मार्फत बाहिरी ब्यानरमा काम गर्ने भएका छन् । उनले ‘झोले २’ निर्देशन गरेबापत २५ लाख पारिश्रमिक लिने खबर छ । तसर्थ राम पनि नेपालका महंगा निर्देशक हुन् ।
नायकहरुमा सबैभन्दा महंगा हुन् अनमोल केसी । उनले फिल्म ‘कृ’ का लागि २० लाख पारिश्रमिक लिए जसले केहि समय अगाडी नेपाली सिनेमाको बजार ततायो । अनमोलले नेपालको पहिलो महंगो अभिनेताको रुपमा चर्चा पाएका छन् । उनी भन्दा पहिले सिनेमामा यति महंगो अभिनेता कोही पनि थिएन । अनमोल सानै उमेरमा धेरै सफलता पाउने अभिनेतामा पनि पर्छन् ।